လောကကွီးက အရှုံးသမားတှကေို ဒုတိယအကွိမျ အခှငျ့ရေးပေးတယျ - Tameelay
လောကကွီးက အရှုံးသမားတှကေို ဒုတိယအကွိမျ အခှငျ့ရေးပေးတယျ
ငါတို့ မနကျဖွနျကို ကွိုဆိုရအောငျ
“လောကကွီးက အရှုံးသမားတှကေို ဒုတိယအကွိမျအခှငျ့အရေးပေးတယျ ။ အဲ့ဒါကို မနကျဖွနျလို့ ချေါတယျ ”
ကြှနျတျော ဒီစကားလေးကို သိပျကွိုကျတာပဲဘယျပုဂ်ဂိုလျပွောခဲ့တာလညျးတော့ မသိဘူး ။
ကြှနျတျောတို့တှရေဲ့ဘဝမှာ အခြိနျအတျောကွာအောငျကွိုးစားခဲ့ရတဲ့ရညျမှနျးခကျြတှေ ၊ ထငျသလို ဖွဈမလာဘဲ ဖွတျရိုကျခံရတဲ့ လောကဓံရိုကျခကျြတှေ ၊ ခပျပါးပါးလေး အရူးလုပျခံရဖူးတဲ့အခြိနျတှေ ၊ အောငျမွငျကာနီးမှ နောကျကြောကိုဓားနဲ့ထိုးခံရဖူးတာတှေ အားလုံးပဲ တဈကွိမျမဟုတျတဈကွိမျတော့ ခံစားဖူးကွမှာပါတှကွေုံ့ဖူးကွမှာပါ ။ သိမွငျဖူးကွမှာပါ ။
ကြှနျတျောတို့ ငိုကွှေးဖူးကွမှာပဲ ။ ကြှနျတျောတို့ မအောငျမွငျခွငျးရဲ့ခံစားခကျြတှလေညျး ရှိဖူးကွမှာပဲ ။
သူမြားကို ယုံကွညျပေးဖို့နနေသောသာ ကိုယျ့ကိုယျကို တောငျ မယုံရဲတဲ့ ဆိုးရှားတဲ့အခြိနျတှကေို ပိုငျဆိုငျဖူးကွမှာပဲ ။ ဒါ ဘာကွောငျ့လဲ ။ ဒီအတှအေ့ကွုံတှကေိုဘယျကရလဲ ။ အဖွကေ တဈခုတညျး ပဲ ။ အဲ့ဒါ” ရှုံးနိမျ့ခွငျး ” က ။ သိပျကို ရိုးရှငျးတဲ့နိယာမပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့လကျလှတျဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာဟာအပွီးတိုငျစှနျ့ခှာသှားကွတာလညျး ဟုတျခငျြမှ ဟုတျမှာပါ ။
ကြှနျတျောတို့ အသဈတဈဖနျပွနျပွီး စလို့ရတဲ့ မနကျဖွနျ ဆိုတာ ရှိတယျ ။ ဒါဟာ လောကကွီးကပေးတဲ့ဒုတိယမွောကျအခှငျ့အရေးပဲပေါ့ ။ မနကျဖွနျတိုငျးဟာကွိုးစားလိုသူတှအေတှကျ သဈလှငျတောကျပနတေယျ။
လှပစှာ ဆီးကွိုနတေယျ ။ အနာဂတျမှာအောငျမွငျမှုရောငျခွညျတှေ သနျးနတေယျ ။ နာကငျြစိတျနဲ့ ကလြာတဲ့မကျြရညျစတှအေတှကျ သူ့ဘကျက ပွုံးပွီး လကျယကျချေါနတေယျ ။ ကွိုးစားစမျးပါ ။ ထပျပွီးကွိုးစားစမျးပါ ။ ထပျကာထပျကာကွိုးစားလိုကျစမျးပါလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျောနတေယျ ။
မနကျဖွနျတိုငျးဟာ ဆီးကွိုနတေယျ ။ ထပျကွိုးစားထပျဖွေ ။ အောငျရမှာပေါ့ ။
ပို့သမြှစာမူတှေ အကွိမျကွိမျ အပယျခံရတာလား….
မနကျဖွနျတိုငျးဟာ ဆီးကွိုနတေယျ ။ထပျရေးထပျပို့ ။တဈကွိမျမဟုတျတဈကွိမျတော့ ကွိုးစားမှုသဈပငျရဲ့အသီးအပှငျ့ကို ခံစားရမှာပေါ့။
ဒါဆို မှတျထား ။ လောကကွီးက ပြော့ညံ့တဲ့လူတှကေိုဘယျတော့မှ နရောမပေးဘူး ။ လူတဈခြို့က ကိုယျ့ကိုစှနျ့လှတျသှားကွတာမဟုတျဘူး ။ လောကကွီးက ကိုယျနဲ့မထိုကျတနျတဲ့သူတှကေို သူ့နညျးသူ့ဟနျနဲ့ ကိုယျ့ဘဝထဲက ပ,ထုတျပဈလိုကျတာ ။ မနကျဖွနျတိုငျးမှာပွုံးပါ ။ ကိုယျ့ကိုယျ ကို တညျဆောကျပါ ။ နာကငျြစသေူတှကေို ကြေးဇူးတငျပါ ။ သူတို့တှမှေားကွောငျး သကျသပွေပါ ။
လူတဈယောကျ ကရြှုံးခြိနျဟာ မိတျဆှစေဈတှကေို တှဖေို့ အကောငျးဆုံး အခြိနျပဲတဲ့ ။
ဒါကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျခြိနျမှာ အားပေးဖေးမဖူးသူတှေ ယုံကွညျမှုပေးဖူးသူတှေ ရှကေ့မားမားမတျမတျရပျတညျပေးဖူးသူတှေ ခံစားနားလညျပေးဖူးသူတှေ ကို ရကျရကျရောရော ခဈြပါ ။ လေးလေးစားစား ဆကျဆံပါ ။တနျဖိုးထား မွတျနိုးပါ ။ နှဈနှဈကာကာ ပွုံးပွပါ ။
ကဲ သူငယျခငျြးရေ ။ မငျးရော ရှုံးနိမျ့ဖူးတယျမလား ..လာ ငါတို့ မနကျဖွနျကို ကွိုဆိုရအောငျ …..
ငါတို့ မနက်​ဖြန်​ကို ကြိုဆိုရ​အောင်​
“​လောကကြီးက အရှုံးသမား​တွေကို ဒုတိယအကြိမ်​အခွင့်​အ​ရေး​ပေးတယ်​ ။ အဲ့ဒါကို မနက်​ဖြန်​လို့ ​ခေါ်တယ်​ ”
ကျွန်​​တော်​ ဒီစကား​လေးကို သိပ်​ကြိုက်​တာပဲဘယ်​ပုဂ္ဂိုလ်​​ပြောခဲ့တာလည်း​တော့ မသိဘူး ။
ကျွန်​​တော်တို့​တွေရဲ့ဘ၀မှာ အချိန်​အ​တော်​ကြာ​အောင်​ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ရည်​မှန်းချက်​​တွေ ၊ ထင်​သလို ဖြစ်​မလာဘဲ ဖြတ်​ရိုက်​ခံရတဲ့ ​လောကဓံရိုက်​ချက်​​တွေ ၊ ခပ်​ပါးပါး​လေး အရူးလုပ်​ခံရဖူးတဲ့အချိန်​​တွေ ၊ ​အောင်​မြင်​ကာနီးမှ ​နောက်​​ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးခံရဖူးတာ​တွေ အားလုံးပဲ တစ်​ကြိမ်​မဟုတ်​တစ်​ကြိမ်​​တော့ ခံစားဖူးကြမှာပါ​တွေ့ကြုံဖူးကြမှာပါ ။ သိမြင်​ဖူးကြမှာပါ ။
ကျွန်​​တော်တို့ ငို​ကြွေးဖူးကြမှာပဲ ။ ကျွန်​​တော်တို့ မ​​အောင်​မြင်​ခြင်းရဲ့ခံစားချက်​​တွေလည်း ရှိဖူးကြမှာပဲ ။
သူများကို ယုံကြည်​​ပေးဖို့​နေ​နေသာသာ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ​တောင်​ မယုံရဲတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အချိန်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ဖူးကြမှာပဲ ။ ဒါ ဘာ​ကြောင့်​လဲ ။ ဒီအ​တွေ့အကြုံ​တွေကိုဘယ်​ကရလဲ ။ အ​ဖြေက တစ်​ခုတည်း ပဲ ။ အဲ့ဒါ” ရှုံးနိမ့်​ခြင်း ” က ။ သိပ်​ကို ရိုးရှင်းတဲ့နိယာမပါပဲ။
ကျွန်​​တော်တို့လက်​လွတ်​ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာဟာအပြီးတိုင်​စွန့်​ခွာသွားကြတာလည်း ဟုတ်​ချင်​မှ ဟုတ်​မှာပါ ။
ကျွန်​​တော်တို့ အသစ်​တစ်​ဖန်​ပြန်​ပြီး စလို့ရတဲ့ မနက်ဖြန်​ ဆိုတာ ရှိတယ်​ ။ ဒါဟာ ​လောကကြီးက​ပေးတဲ့ဒုတိယ​မြောက်​အခွင့်​အ​ရေးပဲ​ပေါ့ ။ မနက်​ဖြန်​တိုင်းဟာကြိုးစားလိုသူ​တွေအတွက်​ သစ်​လွင်​​တောက်​ပ​နေတယ်​။
လှပစွာ ဆီးကြို​နေတယ်​ ။ အနာဂတ်​မှာ​အောင်​မြင်​မှုရောင်​ခြည်​​တွေ သန်း​နေတယ်​ ။ နာကျင်​စိတ်​နဲ့ ကျလာတဲ့မျက်​ရည်​စ​တွေအတွက်​ သူ့ဘက်​က ပြုံးပြီး လက်​ယက်​​ခေါ်​နေတယ်​ ။ ကြိုးစားစမ်းပါ ။ ထပ်​ပြီးကြိုးစားစမ်းပါ ။ ထပ်​ကာထပ်​ကာကြိုးစားလိုက်​စမ်းပါလို့ တိုက်​တွန်းနှိုး​ဆော်​​နေတယ်​ ။
မနက်​ဖြန်​တိုင်းဟာ ဆီးကြို​နေတယ်​ ။ ထပ်​ကြိုးစားထပ်​​ဖြေ ။ ​အောင်​ရမှာ​ပေါ့ ။
ပို့သမျှစာမူ​တွေ အကြိမ်​ကြိမ်​ အပယ်​ခံရတာလား….
မနက်​ဖြန်​တိုင်းဟာ ဆီးကြို​နေတယ်​ ။ထပ်​​ရေးထပ်​ပို့ ။တစ်​ကြိမ်​မဟုတ်​တစ်​ကြိမ်​​တော့ ကြိုးစားမှုသစ်​ပင်​ရဲ့အသီးအပွင့်​ကို ခံစားရမှာ​ပေါ့။
ဒါဆို မှတ်​ထား ။ ​လောကကြီးက ​ပျော့ညံ့တဲ့လူ​တွေကိုဘယ်​​တော့မှ ​နေရာမ​ပေးဘူး ။ လူတစ်​ချို့က ကိုယ့်​ကိုစွန့်​လွှတ်​သွားကြတာမဟုတ်​ဘူး ။ ​လောကကြီးက ကိုယ်​နဲ့မထိုက်​တန်​တဲ့သူ​တွေကို သူ့နည်းသူ့ဟန်​နဲ့ ကိုယ့်​ဘ၀ထဲက ပ,ထုတ်​ပစ်​လိုက်​တာ ။ မနက်​ဖြန်​တိုင်းမှာပြုံးပါ ။ ကိုယ့်​ကိုယ်​ ကို တည်​​ဆောက်​ပါ ။ နာကျင်​​စေသူ​တွေကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါ ။ သူတို့​တွေမှား​ကြောင်း သက်​​သေပြပါ ။
လူတစ်​​ယောက်​ ကျရှုံးချိန်​ဟာ မိတ်​​ဆွေစစ်​​တွေကို တွေ့ဖို့ အ​ကောင်းဆုံး အချိန်​ပဲတဲ့ ။
ဒါ​ကြောင့်​ ဒုက္ခရောက်​ချိန်​မှာ အား​ပေး​ဖေးမဖူးသူ​တွေ ယုံကြည်​မှုပေးဖူးသူ​တွေ ​ရှေ့ကမားမားမတ်​မတ်​ရပ်​တည်​​ပေးဖူးသူ​တွေ ခံစားနားလည်​​ပေးဖူးသူ​တွေ ကို ရက်​ရက်​ရော​ရော ချစ်​ပါ ။ ​လေး​လေးစားစား ဆက်​ဆံပါ ။တန်​ဖိုးထား မြတ်​နိုးပါ ။ နှစ်​နှစ်​ကာကာ ပြုံးပြပါ ။
ကဲ သူငယ်​ချင်း​ရေ ။ မင်း​ရော ရှုံးနိမ့်​ဖူးတယ်​မလား ..လာ ငါတို့ မနက်​ဖြန်​ကို ကြိုဆိုရ​အောင်​ …..
ရာသီဥတုပူလာလို့ သငျ့ကားကို အနကျရောငျစတကောကပျမယျဆိုရငျ ဒါလေးသိထားပါ
တညျမွဲတဲ့ Rs တဈခုဖွဈဖို့ဆိုရငျ … ဒါလေးတှေ သိထားဖို့လိုမယျနျော